लोकतन्त्र बलियो पार्न कांग्रेसमा सामूहिक नेतृत्व चाहिन्छ
नवराज कुँवर काठमाडाैं, ११ वैशाख
आजभन्दा १४ वर्षअघि ११ वैशाख २०६३ मा नेपालमा लोकतन्त्र घोषणा भएको थियो । जहानियाँ राणा शासन, प्रजातन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपाली समाजका यात्राका अविस्मरणीय शृङ्खला हुन् । प्रस्तुत छ, यिनै शृङ्खलामध्ये एक लोकतन्त्रको १४ वर्षे उपलब्धि, चुनौती र भविष्यबारे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग शिलापत्रका नवराज कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादित सार :
लोकतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्ष पुगेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा देश र जनताले के पाए ?
लोकतन्त्र जनतामा आधारित शासन प्रणाली हो । जनताको इच्छाको सर्वोपरिता लोकतन्त्रको मूल्भूत विशेषता हो । हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छौँ । संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो लोकतन्त्रकै देन हो । गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार बनेका छन् । स्थानीय विकासमा जनता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । काम जस्तो गरे पनि तीन तहको चुनावपछि एउटा बलियो सरकार बनेको छ । तर, देश र जनताले जति पाउनुपर्थ्यो, त्यो पाउन नसकेको सत्य हो । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जनताका दुःख, पीडा उस्तै छन् । दैनिकी कष्टकर छ । मुलुकको विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । सैद्धान्तिक रूपमा धेरै कुरा भए/गरिए तर व्यवहारतः देश र जनताको हालत उस्तै छ । नेपाली जनताका आकांक्षा पनि विकसित देशको तुलनामा सामान्य नै छन् । तर पनि उनीहरू असन्तुष्ट छन् । मुलुक सञ्चालनमा थुप्रै समस्या रहेको भन्ने प्रमाण हो यो । देश त लोकतन्त्रमय भयो, तर निरंकुशताबाट पिल्सिएका पार्टीहरू अझै लोकतान्त्रिक बन्न सकेका छैनन् र यिनका नेताहरू विगतको अप्रजातान्त्रिक शासकहरूको शैलीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यसको असर स्वाभाविक छ, लोकतन्त्र कमजोर बन्दैछ ।
भनेपछि अहिलेसम्म लोकतन्त्रको उपलब्धि सिद्धान्तमै सीमित छ, व्यवहारमा छैन ?
यो जनताले महसुस गरेको कुरा हो । लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेका वा लोकतन्त्रले दिएका अधिकारको समान वितरण हुने हो भने जनतामा नैराश्यता पैदा नै हुँदैन । यहाँ लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताको कुरा गर्ने हो भने साझा हित अर्थात सबै नागरिकले समुदायको हितका लागि काम गर्छन् । सरकारले नागरिकलाई ढाँट्दैन र सही सूचना सम्प्रेषण गर्छ भन्ने विश्वास सबैलाई हुन्छ । सबैलाई समान अधिकार, भूमिका, अवसर र उन्मुक्तिको अवस्था हुन्छ । विधिको शासन हुन्छ । कानुनले सबैलाई समान र निष्पक्ष अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । विविधतालाई सबैले स्वीकारेका हुन्छन् । संस्कृति, भेषभुषा, भाषा, धर्म आदिलाई शक्तिको रूपमा ग्रहण गरिन्छ । सरकार वा अन्य कसैबाट कुनै प्रकारको भय, हिंसा वा मृत्युको त्रास नभएको जीवन बाँच्न पाउने अवस्था हुन्छ । सरकारबाट कुनै प्रकारको दबाब नहुने, नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक सोच्न, काम गर्न र व्यवहार गर्न पाउने अवस्था हुन्छ । अरुको अधिकार हनन नगरी आफ्नै तरिकाले आफ्नो खुसी खोज्न पाउने अधिकार हुन्छ । सबै सरकारी शक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको हुन्छ । तर, यीमध्ये धेरै मान्यता कागजमै सीमित छन् ।
त्यसो भए अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पञ्चायतको वर्गविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा के फरक रह्यो र ?
धेरै फरक छ । मूल कुरा के हो भने हामी सैद्धान्तिक दृष्टिले धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ । हामीले कतिपय नयाँ अभ्यास गर्नुपरेको छ । जस्तो कि, संघीयता हाम्रा लागि बिलकुल नयाँ अभ्यास हो । स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिएर हामीले संघीयताको प्रयोग गर्‍यौँ । यो प्रयोग असफलतातिर उन्मुख भएको भान भएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार नभएर गाउँघरमा सिंह मात्र आए भन्ने खालको आभाष जनताले गरेका छन् । किताबमा हेरेर, कोरा कल्पना गरेर, विभिन्न देशका कुरा बटुलेर हामीले संघीयताको प्रयोग गर्‍यौँ । तर, त्यसलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सबैको हक र अधिकारका सम्बन्धमा जुन सचेतनाको आन्दोलन चलिरहेको छ, योचाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । नेपाली समाजको हरेक समुदाय, वर्गहरूमा लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग तथा आफ्ना अधिकारको माग नै सचेतनाको आन्दोलन हो । तर, योसँगै जनतामा अपेक्षा यति बढ्यो कि हाम्रो सरकार, संयन्त्रसँग त्यो परिपूर्ति गर्ने क्षमता नै छैन । अहिले जनतामा देखिएको नैराश्यता यसैको परिणाम हो । लोकतन्त्रले स्थापित गराएका अधिकार र त्यो परिपूर्ति गर्न सक्ने सरकारको क्षमताबीचको दूरीले अलि बढी नैराश्यता पैदा गरेको हो ।
लोकतन्त्र नेताहरूलाई फलिफाप भएको देखियो तर आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याएको पाइँदैन । यस्तो किन भयो ?
हरेक कुराको राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छ । लोकतन्त्र आफैंमा नराम्रो होइन । हामी कसरी चलिरहेका छौं, हाम्रो सोच, चिन्तन, प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने कुराले गहिरो अर्थ राख्छ । लोकतन्त्रपछि जनताले केही पनि नपाएका वा जनताका लागि केही नभएको भने पूर्ण सत्य होइन ।
हामीकहाँ लोकतन्त्र बद्नाम भएको स्वीकार्नु हुन्छ ?
शब्द जस्तो प्रयोग गरे पनि लोकतन्त्रको सही प्रयोग नभएको सत्य हो । हामी अनुशासनबाट अलि च्यूत भएकै हो ।
कसरी भयो लोकतन्त्रको बदनाम ?
लोकतन्त्र कुनै एक व्यक्तिको बलले आएको होइन । राजनीतिक दल, नेपाली जनताको बलबुतामा प्राप्त उपलब्धि हो । लोकतन्त्रमाथि निश्चित रूपमा केही चुनौती देखिएका छन्, राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर त्यस्तो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सही प्रयोग गर्न नसक्दा आइपरेका परिणामको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले नै लिने हो र अब कसो गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसरी अघि बढ्ने हो । ७/८ महिनाअघि संसदमा म बोल्न लागेको थिएँ । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीजी पनि आफ्नो चेम्बरमा हुनुहुँदो रहेछ । सभामुखले आफ्ना कुरा राख्न मलाई समय दिएपछि म रोस्टममा गएँ । प्रधानमन्त्रीजी पनि मैले बोल्न सुरू गरेपछि ध्यान दिएर सुन्न थाल्नुभयो । सभामुखमार्फत मैले उहाँलाई केही सुझाव दिएँ– प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ, ‘दुई तिहाइ आयो अब राजनीतिक स्थायित्व, विकास हुन्छ ।’ तर, दुई तिहाइ त के, तीन चौथाई आए पनि राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । यसमा पाँच वटा फ्याक्टर छन् । राजनीतिक सन्तुलन, आर्थिक सन्तुलन, विदेश नीतिमा सन्तुलन, धार्मिक र सांस्कृतिक सन्तुलन कायम भए सामान्य बहुमतले मात्र पनि राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ । यो कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक छ ।
चुनावअघि तपाईंकाे पार्टी सभापतिले लोकतन्त्र खतरामा छ, कम्युनिस्टले जिते भने मुलुकमा एकदलीय अधिनाकवाद हाबी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । के वास्तवमै अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ?
पार्टी सभापतिको एक हिसाबले त्यो चुनावी स्टन्ट पनि थियो । उहाँले भनेजस्तो कम्युनिस्ट अधिनायकवाद नेपालमा सम्भव नै छैन । आन्तरिक तथा बाह्य अप्ठ्यारा नभएको भए ओलीजीले एकदलीय अधिनाकयकवादको अभ्यास गर्नुहुन्न थियो म भन्न सक्दिनँ । ओलीजी भन्नुहुन्छ– म १४ वर्ष जेल बसेको हुँ । हो, उहाँ जेल पर्नुभएको हो । म आफैंले उहाँलाई जेलमा विजोग अवस्थामा देखेको छु । झापा आन्दोलनबाट समातेर ल्याउँदा केन्द्रीय कारागारकाे गाेलघरमा उहाँले बडो कष्टपूर्ण समय गुजार्नुभएको छ, हामी हेर्थ्यौँ । केही नक्शालवादी नेताहरूको लहैलहैमा लागेर केही पढेलेखेका टाठाबाठा र केही ओलीजस्ता अल्लारे आन्दोलनमा होमिए । त्यतिबेला उमेर र पढाइ दुवै हिसाबले ओलीजी परिपक्व हुनुहुन्नथ्यो । त्यो समयमा माओको क्रान्ति उहाँले कति बुझ्नुभएको थियो त्यो मलाई थाहा छैन तर उहाँहरू लाग्नुभयो । यो हिसाबको स्कुलिङबाट आएकाले उहाँले मौका पाउनुभयो भने निरङ्कुशताको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ । तर, नेपालमा त्यो सम्भव छैन । पार्टी बलियो हुँदा थोरबहुत पेलपाल त कांग्रेस नै भए पनि गर्थ्यो ।
कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्रलाई हेर्ने नजर खासै फराकिलो छैन हाे ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने दुईथरी धारणा छ । मार्क्स, लेनिन, स्टालिनका कुरा पढे पनि खासगरी पूर्वएमालेका नेता एकदलीय अधिनायकवादको कल्पना गर्दैनन् । तर, पूर्वमाओवादीभित्रको ठूलो हिस्सा अझै माओतिर झुकाव राख्छन् ।
तपाईंकै पार्टीभित्रचाहिँ लोकतन्त्रको स्थिति के छ नि ?
पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रको स्थिति पनि ठीटलाग्दो छ । नेपाली कांग्रेसभित्र चाहिँ सही छ भन्दिनँ । कतिपय साथीले लोकतन्त्रको अराजक प्रयोग गरिरहनुभएको छ । हामी त अझ शसक्त लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ । तर, हामीकहाँ नै लोकतन्त्रको प्रयोग सही ढंगले भइरहेको छैन ।
कतिपय नेता भनिरहेका छन्–म नेतृत्वमा आएँ भने पार्टीभित्र लोकतन्त्र बलियो पार्छु । के नेतृत्व अक्षम भएर हो ?
हेर्नुस्, अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र कोही एउटा व्यक्ति छैन जसले सिंगो पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने ल्याकत राखोस् । कसैले म नेतृत्व गर्न सक्छु भनेर नसोचे हुन्छ । त्यो हाइट पुग्ने नेता कोही छैनन् । अब हामीले सामूहिक तरिकाले नेतृत्व लिनुपर्छ । यसो हुँदा सामूहिक निर्णय लिइन्छ, पारदर्शिता कायम हुन्छ । विवाद, असन्तुष्टि कम हुन्छ । मूल कुरा हाम्रो पार्टीभित्र अन्तर्घातको रोग छ । मेरै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा अन्तर्घातकै कारण स्थानीय चुनाव हार्नुपर्‍यो । त्यहाँको साथीहरूले अन्तर्घात गरिदिए । अन्तर्घातकै कारणले देशभर हाम्रो २५ वटा सिट गुमेको छ जहाँ २०/२५ भोटले हार्नुपरेको छ । त्यसैले अब नेतृत्वको हकमा पनि नयाँ परिवर्तनको आवश्यकता देख्छु ।
भनेपछि विधानको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको मत हो ?
हो । बहुअध्यक्ष प्रणाली भनेजस्तै जिम्मेवारीका हिसाबले समानता कायम गर्न सकिन्छ । कांग्रेस अहिले समस्यामा छ । यो समस्याबाट पार्टीलाई निकाल्न मैले अघि सारेको विकल्पले अचुक औषधिको काम गर्नेछ । मलाई हिजोआज धेरै साथीहरूले फोन गरेर भन्नुहुन्छ–तपाईंले राम्रो विकल्प अघि सार्नुभएको छ, यसलाई स्थापित गराउन नेतृत्व लिनुपर्‍यो । पार्टी आफूभित्रै पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनु नै लोकतन्त्रको सफलताको पहिलो सर्त हो । यसले मात्र देशमा सुशासन र विकासको जगलाई मजबुत बनाउन सक्छ र पार्टीले गरिबी, उत्पीडन र वर्तमान निराशासँग जुझ्न सक्, समग्र राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छन् ।
हालै मात्र सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएको छ । तपाईंकै पार्टीसहित थुप्रैले अध्यादेशलाई लोकतन्त्रमाथिको खतराका रूपका औँल्याएका छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
खासगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा म सहमत छु । यो अनुपयुक्त समयमा ल्याइयो, सरकारको गल्ती यही मात्रै हो । मेरो पार्टीले इन्कार गरे पनि दल परिवर्तनको लचिलोपनलाई म समर्थन गर्छु ।
पार्टीले इन्कार गरेको कुरा तपाईं समर्थन गर्दैहुनुहुन्छ । केही सैद्धान्तिक आधार होलान् नि !
हाम्रोजस्तो देशमा हामीले चाहेजस्तो गरे एकैपटक राजनीतिक स्थायित्व कायम हुँदैन । त्यसकारण हामीले राजनीतिक गतिविधि, उतारचढाबलाई हामीले स्थान दिनुपर्छ । स्थान दिइएन भने विस्फोट हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादजीले यो नगरेको भए भोलि दलहरूका बीचमा कहीँ जाने ठाउँ नपाएर आन्तरिक झगडा हुने र देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने सम्भावना रहन्छ । फुट्न पनि नसक्ने र एक भएर रहन पनि नसक्ने स्थिति आयो भने त्यो मुलुकका लागि पटक्कै हितकर हुँदैन । त्यसकारण म सरकारले ल्याएको संशोधन बेठिक होइन भन्छु ।
अहिले देश र जनता संकटमा छन् । यो बेला लोकरक्षाका लागि तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथामका लागि मुलुक लकडाउनमा छ । लकडाउन सुरू भएदेखि नै मेरो दैनिकी राहत तथा उद्धारमै बितिरहेको छ । बिहान ६ बजेदेखि नै राहतका लागि फोन गर्नुपर्ने ठाउँमा फोन गर्छु, कतिपय ठाउँमा आफैँ पुग्नुपर्छ । मै उदयपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव जितेको हुँ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि साढे ७ हजार किलो चामल राहतका लागि पठाएँ । कटारीमा १ हजार किलो, त्रियुगा र चौदण्डीमा २÷२ हजार किलो चामल राहतस्वरुप उपलब्ध गराएको छु । बेलका नगरपालिकालाई २ हजार र ताप्ली गाउँपालिकालाई ५ सय किलो चामल पठाएको छु, आजभोलि नै सम्बन्धित पालिकालाई उपलब्ध हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट अध्ययनका लागि काठमाडौंमा आएका विद्यार्थी र श्रम गरिरहेका मजदुरहरू समस्यामा परेको थाहा पाउनेबित्तिकै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर राहत उपलब्ध गराएको छु । त्यसबाहेक देशका अन्य क्षेत्रका नागरिकको समस्या समाधानमा पनि सहयोग गरिरहेको छु । कोही भोकले नमरुन्, कोही सुर्ताले नमरुन् भनेर म निरन्तर खटिरहेको छु ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख ११, २०७७, ०८:२४:००